Na-abawanye Nkasi Obi na Transportgbọ njem Ọha na Sanliurfa | RayHaber | raillynews
Homeụgbọ okporo ígwèNkasi Obi Na-abawanye Ụgbọ njem na Sanliurfa
Nkasi Obi Na-abawanye Ụgbọ njem na Sanliurfa
29 / 03 / 2018 ụgbọ okporo ígwè, General, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
Public iga na ọdịda na ọtụtụ enọ na ngwa ke nlereanya ka Turkey Şanlıurfa Municipality, ụmụ amaala, ọha iga, nọ na-echere obodo center na-eme ọtụtụ ndị ọhụrụ na ụgbọ n'ime ime n'ógbè na-emetụta na-adịghị mma n'oge a kara ihe.
Na Şanlıurfa, ebe a na-ebugharị ndị njem 220 kwa ụbọchị, Obodo Metropolitan na-achọ ime ka ndụ ụmụ mmadụ na-arụ ọrụ Tram na Trambus na-agbakwụnye ụgbọala ndị ọhụrụ na nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ na ụgbọ okporo ígwè ọha na eze.
Na njem njem njem ọha na eze na-aga n'ihu, Obodo Metropolitan na-ewu ụlọ ọhụrụ nke oge a na obodo etiti niile.
Ka ị na-eche maka njem ụgbọelu nke ụmụ amaala, Ụlọ Ọrụ Metropolitan Municipality Department of Transportation emewo ka bọs 360 kwụsị na mpaghara niile na agbata obi iji gbochie ha ka nsogbu ghara ịba ha ahụ.
Ngalaba Ụgbọ njem nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ọha Mmadụ n'ihu n'okpuru nhazi njedebe nke nkwụsị kpebiri site na ọnọdụ nke usoro mgbakọ ahụ. A na-agbanwezi totem dị ugbu a n'ime ógbè ahụ niile na-emechi emechi na njedebe na ihe ndị chọrọ n'aka ụmụ amaala.
Ruo ugbu a, a chọpụtala njedebe 120 ma zukọta mgbe arụzi na arụkwa ọrụ nke nkwụsị dị na mpaghara niile gụchara. Nchọpụta nke ụlọ, nkwụnye, ndozi na nrụzi na-aga n'ihu site na etiti gaa n'ime ime obodo n'emeghị ka ọ daa.
Ọganihu na-abawanye na Ụgbọ njem na Kayseri
Şanlıurfa Greater Road Construction
SAMULAŞ Academy ga-emeziwanye ịdị mma na njem Ọhaneze
3. A mara aha ọdụ ụgbọ elu
President İBB kwupụtara Mmasị Metrobus
Akụkụ nke Şanlıurfa-Diyarbakir Road na-emechi ka okporo ụzọ
Egwuregwu maka Şanlıurfa Metrobus Infrastructure
Oge mgbagha Amalite na Şanlıurfa